ရှေ့မှချပေးသော..ဓမ္မရေစက်ချနည်းအတိုလေးကို ညီညီညာညာ လိုက်ဆိုသံကြားမိတော့ လွမ်းလိုက်မိတာ.ရွှေ
(၁)ရက်နေ့တွင် ဗာရာဏသီရွှေမြို့ရှိ သံဃာတွေအားလည်း.ဆွမ်းကပ်ခြင်ကြောင်းဖုန်းဆက်ခဲ့၏.မိမိသည်လည်း
မိမိနေရာသို့ပြန်ရောက်လာကာ အို..ကေ. အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွေ့မယ်ဆိုပြီး.လိုအပ်သည်များအား.စာနဲ့
ပြောပြမိတော့၏.သူတို့ဆီမှာတော့ ၁၁ နာရီတဲ့ဗျာ..ကျောင်းသားလေးတို့ဆီမှာ.ညနေ ၅နာရီကျော်နေပြီလေ.
အိန္ဒယရူပီးငွေ.၁၄၀၀၈.ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလေတော့၏.တပေါင်ကို..၆၆.၇၀ ရူပီးဖြင့်.ငွေဈေးနှုန်းကိုပါ တခါတည်းပြောပြတော့၏.ကျောင်းသားလေးလဲ..အချိန်ကြည့်လိုက်တော့.၂၅မိနစ်တော့ရသေးတယ်ဆိုပြီး
သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုအဖေါ်ခေါ်ပြီး..ငွေထုပ်ရာ.western union.ရုံးသို့ အပြေးသွားမိတော့၏.ဟိုရောက်
တော့အချိန်ကား ၁၂ မိနစ်ခန့်သာကျန်တော့၏.မစောငြိမ်းအေး.ပြောသိအတိုင်းဖြစ်တော့၏..လက်မှတ်ထိုးကာ
ထုတ်လာတော့၏.ပို့သူသည်အိမ်ပြန်မရောက်သေး.မိမိသည် ပို့လိုက်သောငွေများကို ထုတ်ခဲ့လေပြီ.
မိမိလည်း..အိမ်ရောက်တော့ ဖုန်းပြန်ဆက်မိ၏..လက်ခံရရှိကြောင်း သို့သော် သူသည် အိမ်တောင်ပြန်
မရောက်သေးလိုင်းကားပေါ်၌သာရှိသေး..မိမိသည်ကား ၀မ်းသာကြောင်း..ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်မကပ်ရစေကာမူ.မငြိမ်းတို့ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကိုယ်စား မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့လေးကို တွေးပြီ..စိတ်အစဉ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတို့သည်လည်း
လန်ဒန်မြို့ရောက် မစောငြိမ်းအေး.=မငြိမ်း နှင့်တကွ.ဓမ္မမိတ်ဆွေများအား..ဒီ ..post လေးတခုဖြင့်
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 9:15 AM